120 Xildhibaan oo maanta taageero u muujiyay Madaxweyne Xasan Sheekh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com-In ka badan boqol Xildhibaan oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa taageero u muujiyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo si weyn uga soo horjeestay dalabkii Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka u soo jeediyeen madaxweynaha inuu is casilo.
Kulan ay Xildhibaanada maanta ku yeesheen Hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku sheegeen in xilligan aan loo baahneyn in dalka uu is bedel siyaasadeed galo, isla markaana loo baahan yahay in la taageero dadka ay colaadaha saameeyeen.
Qaar ka mid ah Xildhibaanadii kulanka soo qaban qaabiyay oo madasha ka hadlay ayaa waxay carabka ku adkeeyeen inay ku qanacsan yihiin sii hogaaminta dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ku amaanay isbedelo la taaban karo oo dhinacyo badan leh mudada yar ee uu Kursiga ku fadhiyo madaxweynaha Soomaaliya, waxayna talo wanaagsan u jeediyeen Xildhibaanadii dhawaan shiray inay u horseedin dalka dib u dhac iyo dhibaatooyin laga soo gudbay.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in aan dalka la gelin wax qal qal iyo dib u dhac, isla markaana la sii ambaqaado horumarada iyo dadaalada xaga amniga ee dowladda wado.
“Kulankeena maanta muhiimadiisa wuxuu yahay taageerada iyo garab istaaga Dowlada Soomaaliya iyo in laga soo horjeesto dalabkii ahaa in madaxweynaha Soomaaliya iscasilo, Dowlada Soomaaliya waxay hamiga ku haaysaa ah in dalka sanadka 2016-ka uu galo doorasho xor ah oo qof waliba oo muwaadin ah xor u noqonayo inuu ka qeyb qaato”ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ahaa xildhibaanadii Muqdisho ku kulmay.
Sidoo kale waxa Kulanka ka hadashay Xildhibaanad Aamina Cumar, waxayna xustay in loo baahan yahay in wax loo qabto dadka Tabaaleysan oo aan lagu Mashquulin in Madaxda Dowlada waajibkooda shaqo gudanaya la niyad jabiyo.
Xildhibaanadii kale ee ka hadlay kulankan ayaa u jeediyay Xildhibaanada saaxibadood ah in aysan dalka gelin fowdo, iyagoo xusay in loo baahan yahay inay taageeraan dadaalka loogu jiro xasilinta dalka iyo dib u dejinta dadkii ka barakacay deegaanadii lagu dagaalamay.
Xildhibaanadan ayaa gaarayay ilaa 129 Xubnood, waxaana ay ka badnaayeen tiradii Xildhibaanadii todobaad ka hor ku shiray Muqdisho oo iyana ilaa 116 gaarayay, iyadoo ay muuqato inuu socdo qorshayaal lagu kala fur furayo Xildhibaanada ku kacsan Madaxweynaha.
Si kastaba ha ahaatee kulankan Xildhibaanada ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa jawaab u ahaa kulan todobaadkii hore Muqdisho ku yeesheen ku dhowaad boqol Xildhibaan oo Madaxweynaha u gudbiyay warqad talo soo jeedin ah oo ay kaga dalbanayeen inuu is casilo, kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ku guuldareystay hogaaminta dalka.
In ka badan boqol Xildhibaan oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa taageero u muujiyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo si weyn uga soo horjeestay dalabkii Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka u soo jeediyeen madaxweynaha inuu is casilo.
Information Minister “Somali media advances national agenda on security and Stabilization